Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan macruufka
Maqaalka aad muujinaysaa laba siyaabood oo ay u gudbiyaan xiriirada, jadwalka taariikhda, SMS, videos, sawiro, muusig iyo barnaamijyadooda ka Android inay macruufka. Read More >>
VLC waa mid ka mid ah ciyaaryahan warbaahinta ugu caansan oo faa'iido weyn waxaa ka mid ah waa in ay u furan yahay il software. Horumarinta sii si joogto ah la xariirta si ay u sii fiican. Halkan waxa ku yaala dhawr talo si aad Read More >>
Horumarka joogtada ah ee technology hadda fulinta riyadii dad badan oo isticmaala android la macruufka emulator u android, Read More >>
Degsado music ee macruufka ama Android si fudud lagu gaari karaa iyadoo la isticmaalayo hababka soo socda. Read More >>
Posted by | 27.10.2015
Ma waxaad qorsheyneysa inay lasoo wareegto ka Android inay macruufka? Maqaalkani waxa uu ku hoggaamin doonaa sida si ay u gudbiyaan xiriirada ka Android inay macruufka talaabo talaabo ah. Read More >>
Ma rabtaa in aad tirtirto sawiro ku saabsan arrimo deg deg ah? Maqaalkani waxa uu ku siinayaa hab aad u fudud in ay u dhammayn. Read More >>
macruufka Photo Transfer kaa caawinaysaa in aad ka qalabka macruufka dajiyaan photos in computer. Kaliya 3 talaabooyin fudud, sawiro ku Camera Roll oo Photo Library wareejiyo Read More >>
Iyada oo ay taasi Manager ugu wanaagsan ee macruufka Photo, waxaad samayn kartaa, sawiro ka / wareejiyo qalabka macruufka ah, baab'iyo sawiradiisii ​​ka qalab macruufka ah iyo sidoo kale. Read More >>
Lumay oo dhan photos halka lagu casriyeeyo aad iPhone ama iPad in macruufka 7? Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sida inuu ka soo kabsado photos lumay. Read More >>
Weli raadinaya siyaabo ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah ka macruufka 6 ilaa 7 macruufka? Waa sahlan tahay haatan. Tani waxay halkan article aad bixisaa cirfiid xal fudud, waxaa ka. Read More >>
Ayaa laga badiyay xogta ku saabsan qalabka macruufka? Waxaad tahay meesha hadda. Maqaalkani waxa uu doonayaa inuu kula siyaabo qaar ka mid ah lacag la'aan ah inuu ka soo kabsado xogta macruufka ee Mavericks wadaagaan. Read More >>
Ma waxaad wali raadinaysaa siyaabo in ay tirtirto songs on macruufka 6? Waa hagaag, halkan waa hab si cadaalad ah si fudud oo aad ka saari karto oo dhan songs waqti. Read More >>
Ma doonaysaa si ay u gudbiyaan xiriirada ka telefoonka Symbian in aad iPad, iPhone, ama iPod Touch? Maqaalkani waa mid xilkan si ay kuugu hagaan sida loo sameeyo in faahfaahinta. Read More >>
Waxaa faraxsan in JAILBREAK macruufka aad 6 laakiin badiyay dhammaan faylasha ka iPhone? Qaado fudud, akhri maqaalkan inuu ka soo kabsado files iPhone sida xiriirada, fariimaha, sawiro istareexsan. Read More >>
Macruufka Best File Explorer for Windows / Mac
macruufka File Explorer - Wondershare TunesGo waa sahaminta file macruufka ugu wanaagsan ee dadka isticmaala si ay u sahamiyaan files warbaahinta on qalabka macruufka. Read More >>
Posted by Emma Shaw | 12.10.2015
Waxaad isticmaali kartaa Wondershare MobileTrans in ay xogta ka iPhone ah in a phone Google Nexus wareejiyo. Read More >>
Sidee si ay u gudbiyaan xogta ka Acer in macruufka Qalabka? Boggan waxaa ku tusi doonaa talaabo hababka talaabo. Read More >>
MobileTrans Ka Wondershare, waa ma aha oo kaliya sameeya gurmad iyo soo celiyo qalabka Android jir, laakiin wareejin karaan kasta oo xog kasta. Read More >>
Article waxay kuu sheegi sida loo xogta laga qalabka macruufka wareejiyo telefoonada Huawei Read More >>